အယ်ဖိုး: ကျော်ကြမယ်ဟေ့ ခွကြမယ်
ကျွန်တော်တို့ ရွှေမြန်မာပြည်ကနေ youtube ဆိုက်ကို ကြည့်ခွင့်မပေးထားပါဘူး . ပိတ်ထားပါတယ် . မနေ့က ညီလေးတစ်ယောက် မြန်မာပြည်ကနေ youtube movies တွေကို ဘယ်လိုကြည့်ရင် အဆင်အပြေဆုံး လဲလို့မေးလာပါတယ် . freedom လဲမသုံးချင်ပါဘူးလို့ ပြောတယ် . ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အခုပေးလိုက်တဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်ကလေးကို သွားစေချင်ပါတယ် . အဆင်ပြေမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ် . အခုပေးတဲ့ ဆိုက်ကိုတော့ မြန်မာပြည်က ပိတ်မထားရသေးဘူးလို့ သိရပါတယ် .. Msn, AIM, Yahoo နှင့် Gtalk တို့ကိုလဲ အဆင်ပြေပြေပဲ ၀င် Chat လို့ရပါသေးတယ် .. ကဲ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ၀ဘ်ဆိုက်လိပ်စာနာမည်က https://polysolve.com ပါ .. အဆင်ပြေမယ်လို့လဲမျှော်လင့်ပါတယ် . ပြီးတော့ အခုပို့စ်နှင့်အတူ ကျော်ဖို့၊ ခွဖို့အတွက် ၀ဘ်ဆိုက်လိပ်စာတွေလဲ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်
Posted by Peace at 12:22 PM